ओलीको ‘अम्बाको पात’ मा के छ त्यस्तो दम? – Health Post Nepal
ओलीको ‘अम्बाको पात’ मा के छ त्यस्तो दम?
२०७८ वैशाख १६ गते १३:४३
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही साताअघि दाबापूर्वक भनिदिए– दैनिक अम्बाको पात उमालेर खाँदा कोरोना भाइरस ठिक हुन्छ।
गएको वर्ष यसैगरी उनले ‘बेसार पानी खाने, हाच्छ्युँँ–साच्छ्युँ गरेर चट पार्ने’ भन्दै जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए।
तर, ओलीले ठोकुवा गरेजस्तो न कोरोनाको पहिलो लहर बेसार पानीले मथ्थर पार्न सक्यो न अहिले अम्बाको पात उमालेर खाँदै नेपालीहरूले घातक नयाँ भेरियन्टसँग जुध्न सकिरहेका छन्।
अहिले त झन् अस्पतालमा आइसियुसमेत नपाएर कोभिड संक्रमितहरू छटपटाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका यी दुवै दाबीलाई मानवजातिले अहिलेसम्म विकास गरेका वैज्ञानिक प्रमाणहरूले साथ दिँदैनन्।
न त प्रधानमन्त्रीले नै यी दाबीलाई कुन विज्ञानको कुन तथ्यले आधार प्रदान गर्छन् भनेर खुलाएका छन्।
अम्बाको पातको सेवनबाट मानव स्वास्थ्यलाई पुग्ने लाभका विषयमा सायदै कुनै अनुसन्धानमूलक ‘लिटरेचर’ भेट्न सकिन्छ।
कुनै पनि चल्तीका खाद्यवस्तुको ‘पोषकीय तथ्यक’ (न्युट्रिसन डेटा) फेला पार्नु नौला विषय होइन, इन्टरनेटले व्यापकता पाएको आजको जमानामा।
प्रयोगशालाको परीक्षण नतिजालाई आधारभूत आधार मान्ने आधुनिक विज्ञानले प्रायः चल्तीका खाद्यवस्तु, औषधीय गुणका वनस्पतिको न्युट्रिसन डेटा केलाइसकेको छ।
तर, अम्बाको पातको न्युट्रिसन डेटा जे जति सार्वजनिक रूपले उपलब्ध छन्, त्यसलाई हेर्दा कोभिड उपचारसँग जोडेर ठोकुवा गर्न सकिने कुनै आधार बन्दैनन्।
मानव स्वास्थ्य र औषधीसम्बन्धी जानकारीका लागि संसारकै विश्वासिलो इन्टरनेट स्रोत मानिने ‘वेबमेड’ ले अम्बाको पातको चिया (जसलाई उमालेर खाने तरिकासँग मिल्दोजुल्दो रूपमा हेर्न सकिन्छ) बारे पनि सूचना राखेको छ।
वेबमेडका अनुसार अम्बा पात चियालाई भारत र चीनमा लामो समयदेखि पखालाको उपचारमा प्रयोग गरिँदै आएको छ।
जापानले चाहिँ मधुमेहको उपचारमा यसको प्रयोगलाई स्वीकृति नै दिइसकेको छ।
पछिल्लो समय परम्परागत औषधीमा आधुनिक तप्काको पनि अभिरुचि बढेकै हो। र, यही सिलसिलामा अम्बा पातको चिया पनि चर्चाको विषय बनेको हो।
तर, चिकित्सकीय अनुसन्धानले चाहिँ अम्बा पात चियासम्बन्धी सबै दाबीलाई सही प्रमाणित गरेको छैन। तर, केही फाइदा चाहिँ हुनसक्छन्।
प्रायः सबैखाले चियाजस्तै अम्बा पात चियामा पनि धेरैजसो मात्रा पानीकै हुन्छ। चियाको रूपमा आउँदा चाहिँ अम्बा पातमा हुने कम्पाउन्ड, भिटामिन, मिनरल लगायत सबै चिज एकदमै धेरै पातलिएको र न्यूनमात्रामा कायम रहन्छन्।
एक मग अम्बा पात चियामा क्यालोरी, प्रोटिन, फ्याट र फाइबर सबै शून्य प्रतिशतमा रहन्छन्। क्यालोरी चाहिँ करिब एक प्रतिशतमा रहन्छ।
भिटामिन र मिनरल नगण्यमात्रामा रहन्छन्। तर, युनिक पोलिफेनोल नामक एकखाले एन्टिअक्सिडेन्ट चाहिँ केही मात्रामा रहेको पाइन्छ।
यतिमात्रैले पनि अम्बा पात चियाबाट केही सम्भाव्य फाइदा पुग्ने अनुसन्धानहरूबाट देखिन्छ।
जस्तो, कुनै पनि खाले संक्रमणबाट हुने पखाला यो चियाको सेवनबाट चाँडै ठिक भएको पाइन्छ। पोलिफेनोल एन्टिअक्सिडेन्टका कारण हामीले खाएको खानाबाट कार्बोहाइड्रेड सोस्ने काममा नियमन गर्न मद्दत पुग्छ।
खानालगत्तै यो चिया पिउँदा ह्वात्तै सुगर लेभल बढ्ने समस्या हटाउन सहयोग पुग्छ। र, यसले सुगरको अन्य औषधीसँग अवान्छित अन्तक्र्रिया पनि गर्दैन।
यसैगरी अम्बा पात चियाले विभिन्नखाले एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिफंगल गुणहरू देखाएको मानिन्छ। पातहरूमा विभिन्न कम्पाउन्ड हुन्छन् जसले फ्ल्याभोनोइडस नामक एन्टिअक्सिडेन्ट, टानिस, एसिडलगायत तत्व सक्रिय तुल्याउँछन्।
अम्बा पातको जथाभावी प्रयोग खतरनाक पनि हुनसक्छ। यसले छालामा एलर्जीसमेत हुनसक्छ।
यी सबै तथ्य अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको अम्बाको पात उमालेर खाने ‘प्रेसक्रिप्सन’ कुनै मनगढन्ते भनाइ जस्तो देखिन्छ, खासगरी कोरोना भाइरस संक्रमणकै सवालमा।
कोरोना भाइरससँग लड्न प्रतिरोधि क्षमता बढाउनुपर्ने भन्ने तर्कमा बरु फल अम्बाकै नियमित सेवन चाहिँ सिफारिसको विषय बन्न सक्छ।
किनकि, फल अम्बामा ३ सय प्रतिशतसम्म भिटामिन सी पाइने न्युट्रिसन डेटाले देखाएको पाइन्छ। तर, भिटामिन सीमात्रैको सेवनले भाइरस तह लाग्ने चाहिँ प्रमाणित तथ्य होइन। नत्र, किन भ्याक्सिन बनाउनुपथ्र्यो?